Wararka - Maxaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho marka lagu shaqeynayo qalabka cusub ee naaftada
Diyaarinta Matoorka Naaftada
CUMMINS BOQORKA Bamka
Saliidda & Gaaska
Bangiga & Isbitaalka
Ku saabsan Mamo
Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho marka lagu dhex shaqeynayo qalab dhaliyaha naaftada cusub
Dab-dhaliye cusub oo naaftada ah, dhammaan qaybaha ayaa ah qaybo cusub, oogada sare ee naaftada ayaan ku jirin xaalad u dhigma.Sidaa darteed, socodsiinta hawlgalka (sidoo kale loo yaqaan socodsiinta hawlgalka) waa in la sameeyaa.
Ku shaqaynta shaqaynta waa in la sameeyo koronto-dhaliyaha naaftada in uu ku shaqeeyo muddo cayiman iyada oo la raacayo xawaaraha hoose iyo xaaladaha culeyska hooseeya, si uu si tartiib tartiib ah ugu dhex socdo dhammaan sagxadaha taranka ee naaftada naaftada oo si tartiib tartiib ah u helaan xaalad ku habboon.
Ku shaqeynta shaqada ayaa muhiimad weyn u leh isku halaynta iyo nolosha matooriyaha naaftada.Matoorada cusub iyo kuwa dib u habaynta lagu sameeyay ee warshada naaftada ayaa lagu shubay oo la tijaabiyay ka hor inta aan laga tagin warshada, sidaa awgeed looma baahna in muddo dheer wax rar ah lagu shubto, hase yeeshee matoorka naaftada ayaa wali shaqaynaaya bilowgiisii ​​hore. heerka isticmaalka.Si loo hagaajiyo socodka xaalada mishiinka cusub oo uu u dheereeyo cimrigiisa adeeg, arrimaha soo socda waa in fiiro gaar ah loo yeesho isticmaalka bilowga ah ee mishiinka cusub.
1. Inta lagu jiro wakhtiga shaqada ee bilowga ah ee 100h, culayska adeega waa in lagu xakameeyaa inta u dhaxaysa 3/4 awooda la qiimeeyay.
2. Iska ilaali shaqo la'aanta daba dheeraada.
3. Fiiro gaar ah u yeelo si aad ula socoto isbeddelada xuduudaha hawlgalka ee kala duwan.
4. Had iyo jeer hubi heerka saliidda iyo isbedelka tayada saliidda.Muddada isbeddelka saliidda waa in la soo gaabiyo hawlgalka hore si looga hortago daal halis ah oo ay sababaan walxaha birta ah ee lagu qaso saliidda.Guud ahaan, saliidda waa in la beddelaa hal mar ka dib 50 saacadood ee hawlgalka bilowga ah.
5. Marka heerkulku ka hooseeyo 5 ℃, biyaha qaboojinta waa in hore loo sii kululeeyaa si heerkulka biyuhu kor ugu kaco 20 ℃ ka hor inta aan la bilaabin.
Ka dib marka la galo, dab-dhaliyeku waa inuu buuxiyaa shuruudaha farsamada ee soo socda:
Unuggu waa in uu si degdeg ah u bilaabi karaa khalad la'aan;
Cutubku waxa uu si deggan ugu shaqeeyaa culayska la qiimeeyay iyada oo aan lahayn xawaare aan sinnayn iyo dhawaq aan caadi ahayn;
Marka culeysku si xoog leh isu beddelo, xawaaraha matoorka naaftada si degdeg ah ayaa loo dejin karaa.Ma duula mana boodo marka ay degdegsan tahay.Marka xawaaruhu gaabiyaan, mishiinku ma joogsan doono, dhululubadana ma ahaan doono mid adeega ka maqnaada.Isbeddelka xaaladaha culeyska kala duwan waa inuu ahaadaa mid siman iyo midabka qiiqa qiiqa waa inuu noqdaa mid caadi ah;
Heerkulka biyaha qaboojinta waa mid caadi ah, culeyska cadaadiska saliidda ayaa buuxiya shuruudaha, heerkulka dhammaan qaybaha saliidda waa caadi;
Ma jiraan wax shidaal ah oo ka daadanaya, daadinta biyaha, daadinta hawada iyo daadinta koronto.
Waqtiga boostada: Nov-17-2020
Cinwaanka:17F, dhismaha 4aad,wusibei Tahoe plaza, 6 Banzhong road, degmada Jinan, magaalada Fuzhou, Gobolka Fujian, Shiinaha